IPhone Battery Review - Windows Gadgets
IPhone Gadget Gadget
Fanaraha-maso tanteraka ny Battery iPhone, Free Gadget System Monitoring
iPhone Battery dia iray amin'ireo gadget fanaraha-maso ankafiziko indrindra ho an'ny Windows. Ny tabilao iPhone Battery Windows 7 dia mampiseho ny fiarovanao amin'izao fotoana izao - izany no izy - fa izany indrindra no fomba tsara indrindra hitako teo amin'ireo gadget hafa hitako.
Ny fitaovana gadget an'ny iPhone dia iray amin'ireo gadget roa monja izay ahafahako mitazona ny fotoana rehetra ao amin'ny laptop Windows 7.
Fanamarihana: Ny gadget an'ny iPhone dia mampiasa Windows 7 sy Windows Vista .
Download ny Battery iPhone
Pros & Amp; maharatsy ny mifampiresaka
Ny tombontsoa lehibe amin'ny fitaovana gadget an'ny iPhone dia hoe tsotra sy manintona izy io:
Safidy misy hoditra maromaro vita tsara (ny iray amin'ireo dia ny batterin'ny iPhone)
Safidy lehibe telo safidy
Mampiakatra ny haavon'ny fehezantenin'ny olona
maharatsy ny mifampiresaka:
Fampahalalana bebe kokoa momba ny Gadget Gadget'ny iPhone
Ireto misy antsipirihany bebe kokoa amin'ity gadget Windows ity:
Betsaka bateria telo no atolotra ao amin'ny iPhone Gadona Battery - manana safidy ianao eo anelanelan'ny madinika, midina na lehibe
Ny iPhone gadget an'ny batterie dia mampiseho ny lany ho an'ny batterie amin'ny fomba mahafinaritra toy ny Apple iPhone. Ohatra, ny bateria dia hiseho rehefa feno tanteraka ny batterie
Gadget dia ahitana ny hoditra "tena fiainana" koa, anisan'izany ny Battery Duracell, ny laharana efa-taona, ary ny maro kokoa
Ny fivezivezin'ny fivezivezin'ny Windows gadget dia azo atonina. Amin'ny 20% isa, afaka mifidy zavatra avy amin'ny 100% hatramin'ny 20%
Tahaka ny amin'ny gadona Windows hafa, azonao atao ny mampiditra ny gadget an'ny Battery iPhone eo amin'ny sehatr'asa eo amin'ny biraonao ary ataovy eo ambonin'ireo varavarankely hafa rehetra anananao
Ny hevitro ao amin'ny iPhone Gadatra
Ny Battery an'ny iPhone dia fitaovana tsara fanina batterie. Mora sy mahasarika amin'ny kely fotsiny amin'ny fomba fanampiana - zavatra ankafiziko amin'ny gadget.
Raha ny fahafaha-miasa dia miasa tsara ny iPhone Battery Windows 7 gadget. Mazava ho azy, misy fitaovana maro fanaraha-maso ny pilina avy any izay miasa toy izany ihany koa. Hahafahanao manidina ity iray ity satria fotsiny hoe mahafinaritra ilay izy, izay misy antony tsara toy izany.
Ny hoditry ny battera iPhone dia mijanona eo. Tsy hitako ny fahasamihafana eo amin'ny sary famantarana ny bateria roa rehefa mametraka ny finday ho amin'ny monitor aho mba hampitahana. Tena natao tsara izany. Raha mpankafy iPhone ianao, dia ho tianao tokoa ity hoditra ity.
Ankoatry ny hoditry ny batterie iPhone, misy olona tena hafa tena tsara toy ny Duracell batterie, telefona efa tranainy, sehatra manga, ary ny hafa. Tena mpankafy ny sary fotorealistic aho, ka ity gadget ity dia tena iray amin'ny ankafiziko indrindra.
iPhone Battery dia download maimaim-poana avy amin'ny Softpedia. Jereo ny fomba fametrahana gadget Windows raha mila fanampiana ianao.
Ny fitaovana gadget an'ny iPhone dia tsy isalasalana fa ny safidy gadget "tsara indrindra" ho an'ny fanaraha-maso ny pilina ao Windows 7 sy Windows Vista.
Gadget hafa toy ny iPhone Battery
Ny iPad gadget ho an'ny fitaovana iPhone dia tonga lafatra satria mitazona maso ny solosainao. Tsy feno endri-javatra ary mahafinaritra ny mijery izany. Na izany aza, raha mitady fitaovana fanaraha-maso rafitra iray ianao, izay tsy misy hafa amin'izany, dia jereo ity lisitry ny gadget Windows 7 hafa .
Ohatra sasantsasany amin'ny gadget hafa fanaraha-maso Windows hafa dia ny DriveInfo , margu-NotebookInfo2 , ary System Control A1 .
MiniTool Partition Wizard Free v10.2.2
Ny Digital Digital Data LifeGuard Diagnostic
9 Best Free Software FTP Server
4 Zavamaniry maimaim-poana ho an'ny Password Recovery
4 Fandaharam-pizahan-tany Memory Free
Evolisiona 2.6 - Programa mailaka
Inona no atao hoe Snapchat? Fampidiran-dresaka ho an'ny fampihomehezana malaza
Fiarovana amin'ny tsy fahampian-tsakafo
Alefaso imailaka amin'ny mailaka Lisitry ny fandefasana Mozilla
Ny voka-pikarohana tsara indrindra ho an'ny olona
Mandra-pahoviana no ho farany ny Batemy XL XL?
Top Rules amin'ny fanitsiana lahatsary
Aoka ho Detectifika Tsara Indrindra Amin'ny Objet Hidden Object: Crimes Mistery
Alefaso ny kaonty sy adiresy mailaka avy amin'ny Outlook Mail amin'ny Internet
Ireo 20 Podcasts Best of 2018
Ampiasao ny safidy Mac Mail an'ny BCC mba handefa mailaka amin'ny antoko
Ahoana no ahitako ny Internet Download Manager Serial Number?
Ahoana ny fomba hanoratana ny adiresin'ny tranokala ao amin'ny Safari
7 Miantefan'ny Google Mobile Apps
5 fitaovana lehibe ho an'ny fampivoarana HTML ho PDF
Inona no tokony ho fantatrao momba ny Netscape 7.2, Plus aiza no haka izany
Fahatakarana Wi-Fi sy ny fomba fiasa
Ahoana ny fomba hampidirana namana amin'ny Snapchat amin'ny alàlan'ny fanandramana ny famandrihana azy